Kupeta ebikes: wedzera zvishoma kurerukirwa kune hwako hwakabatikana hupenyu.
musha Blog Kupeta ebikes: wedzera zvishoma kurerukirwa kune hwako hwakabatikana hupenyu
Zuva ： 2021-07-30 Zvikamu:Blog Views: 1,387 maonero
Denga rakajeka uye rine simba, maruva emakomo ari kutumbuka, uye inguva yekutasva mugore rehondo. Kune akawanda marudzi ema ebikes, asi inonyanya kushandisika uye inozivikanwa ndiyo inofanirwa kunge iri kupeta ebikes. Kunyangwe iko kuguta kuenda, kuzorora, mitambo yemitambo, kana nzendo dzekuchovha bhasikoro, urwu rudzi rwe "rwunotakurika rwegirinhi yekutakura" inodiwa kwazvo neruzhinji.
Ndiri munzira yekuenda nekudzoka kubva kubasa nguva pfupi yadarika, ndakaona kuti varume nevakadzi vazhinji vakanaka vanosarudza nzira dzinotevera dzekufambisa: mota dzinopetwa dzemagetsi. Ehe, ingori mota inopetwa yemagetsi. Nekuda kwehunhu hwayo hudiki, inogona kufamba zvakasununguka kunyangwe mumigwagwa yakazara. Zvichienzaniswa nezvifambiso zveruzhinji zvakaita semabhazi nechitima, kushandisa iyi mini-yemagetsi mota inogona zvakare kunakidzwa nenzvimbo usinga tsungirire iyo "kusvina" kunzwa kwekukwiza mapendekete. Ipapo dzinoteedzera dzinopetwa dzemagetsi mota dzinozove dzakakodzera kwazvo kune novices.
1, Kupeta ebikes 20 inch aluminium alloy A2AL20
A2AL20 ine Multi-function LCD inoratidzira. Zvakare, zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa nefekitori yedu pachedu, zviri nyore kudzora mhando, zvinogona kuratidza Kure, Mileage, Tembiricha, Voltage, Error kodhi uye nezvimwe. Iwe unogona nyore kushandisa iyo neiri bhuku. Nyowani yekuvandudza mwenje mwenje 3W mwenje mwenje wakagadzirirwa yehusiku kutasva, inodzorwa neakawanda-mashandiro eLCD kuratidza, yakachengeteka uye iri nyore
Iine 5V1A USB nharembozha yekuchaja chiteshi, kana foni yako yabuda musimba, pindura kune emergency. Aluminium alloy folding furemu 6061 aluminium alloy ebike furemu ine yakakura yekugadzirisa mashandiro, hukuru hwesimbi hunhu uye electroplating, yakanaka ngura kuramba uye yakasimba kukakama. Kumashure rack lithiamu bhatiri. Bhatiri bhokisi rinobviswa kuti iwe ugone kuribhadharisa mubhasikoro kana zvakasiyana mukamuri rako.
2、20 inch 36v yekupeta mafuta tai ebikes A7AM20
A7AM20, Yekupeta mafuta tai yemagetsi bhasikoro ine kumberi neshure 160 disc bhureki uye kaviri-chubhu furu yekuvandudza simba (yakanaka sarudzo kune yakakura vatyairi), 20 inch kupeta aluminium alloy furemu, diki saizi, kureruka kurema kupfuura mamwe 26/28 inch mafuta ebike . Inesimba 250/350 watt mukati yakagadziriswa mafuta emagetsi bhasikoro mota yakatarwa ine hombe 36/48-volt bhatiri inokwanisa kukwevera huremu hwakawanda uye kuenda-munzira munzira dzakazara tsvina, bhatiri rinobviswa uye kunyange iwo maraki anogona kubviswa
Runhu hwemazuva e LED (iyo mberi inobatanidzwa kuti ibvise ibhetri yakakura), yakakodzera mechanical disc mabheki, inowanzovhara motokari asi iwe unowana matanho manomwe ekufambisa zvishoma kana kuti zvakanyatsogadzikana
3-36V350W kupeta madzimai ebikes A1-7
A1-7, Mota yaro isina mabhureki inogona kupa simba rakaringana reiyi yekupeta bhasikoro remagetsi, yakasimba uye inoshanda. Iko kushanda kwakanyanya kunopfuura makumi masere muzana. Iyi bhasikoro ine 80w kana 250w isina brushless mota, uye 350AH lithium bhatiri. Iyi foldable yemagetsi bhasikoro's max kumhanya iri 10-25km / h, uye iyo max renji iri 32-40KM. Iri bhatiri remagetsi bhasikoro rakavanzwa mune dhizaini dhizaini uye isina dhizaini dhizaini, uye ino bhatiri nguva yekuchaja ingori ma60-5 maawa uye iyo max renji iri 7-40KM.
Iyi yemagetsi bhasikoro brake system inopa yakanakisa braking, uye kuita mune yakanyorova uye matope mamiriro. Izvo zvinoita kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka kwako paunenge uchimedura. Iyi bhasikoro yemagetsi ine mwenje we LED unovimbisa kuona kwakajeka kwekutasva husiku, uye zvakare ine chiteshi chechaji cheUSB, saka kana foni yako yapera simba remagetsi unogona kuishandisa kubhadharisa foni yako. Iri bhegi rinopeta makumi maviri, uye tinokurudzira 20cm-145cm kukwirira vanhu kuti vaikwire, uye iyo max inotsigira huremu i185kg.
Muchidimbu, ese akakodzera kufunga, saka kana iwe uchifarira mumwe wavo, taura nesu.
Prev: Nhoroondo yekuvandudza yemabhasikoro emagetsi
Next: Matipi ekuchengetedza ekushandisa mabhasikoro emagetsi